एमाले र माओवादी नेता पार्टी एकताबारे के भन्छन् ? – ejhajhalko.com
एमाले र माओवादी नेता पार्टी एकताबारे के भन्छन् ?
२९ माघ २०७४, सोमबार ०४:१२ 210 पटक हेरिएको
काठमाडौं । पार्टी एकताको सन्दर्भमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको भनाइ छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।